UN-ka oo dhaliilay in Soomaaliya loo doorto Guddiga Xuquuqda Haweenka
BERNE, Switzerland - Soomaaliya ayaa kamid noqotay wadamada loo doortay in ay xubin buuxda ka noqdaan Guddiyada Qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka Xuquuqda Haweenka.
Balse Jamciyada Qurumaha ka dhaxeysa ayaa si naadir ah u dhaleeceysay talaabadaasi, "sababtoo ah kaalinta haweenka ee dalka oo liidata", sida ku cad website-ka Ururkaasi.
Hillel Neuer, agaasimaha fulinta ee U.N. Watch, hay'add madax banaan oo fadhigeedu yahay Switzerland, ayaa arrintaan ku tilmaamtay mid meel ka dhac ku ah qawaaniinta UN-ka.
Dalalka kale ee xubinta ka ah Guddiyadaasi waxaa kamida; Democratic Republic of the Congo (DRC), Lebanon, Nigeria, Sierra Leone [oo qaarada Afrika ah], Germany iyo New Zealand.
"In xubnaha xuquuqdaha aadanaha ay qayb ka noqdaan dalal sida Soomaaliya oo dumarka firnooci loo gudo, iyo DRC oo loo arko caasimada kufsiga, waxay khiyaano ku tahay xeerarka Qaramada," ayuu Hillel u sheegay Fox News.
Sidda ku cad mareega UN-ka, shaqada Guddiyadaan qabanayaan ayaa ah horumarinta xuquuqda haweenka, diiwaan-gelinta xaqiiqda noloshooda, qaabeynta sinaanta Jinsiga iyo awood-siinta dumarka.
"Soomaaliya, dumarka waa la niyad-jebiyaan, curuurnimo ayaa lagu guursadaan, xayiraado ayaa laga saaraa siyaasada, houmarinta iyo xiliyada la qaadanayo go’aanada muhiimka ah," ayuu ku daray.
Website-ka Qaramada Midoobay oo lagu daabacay qoraal u muuqda mid si wayn loogu soo taag-taagsaday ayaa lagu tibaaxay in "haweenka Soomaliyeed ay wajahayaan cadaawad soo jireen ah".
"Rabshadaha ka dhanka ah dumarka iyo gabdhaha wali way ku badan yihiin Soomaaliya. Barakicin, beegasasho iyo markay ka hadlaan dagaalka ka dhanka ah oo la weeraro, halka ragu is-daafacayaan," ayaa lagu yiri qoraalka.
Hillel Neuer oo hadalkiisa sii wata ayaa soo jeediyay in Soomaaliya iyo wadamada kale ee ku tunta xuquuqda haweenka gebi ahaanba laga saaro Guddiyadaasi.
"Uma qalmaan guddiyadaan, waa in [dalalkaasi] ay dabacada ka ilaashadaan digaagooda [doorada]," ayaa laga soo xigtay warbixinta lagu daabacay website-ka Qaramada Midoobay.
Sikastaba, doorashadaan ayaa lamid tii sanadkii hore oo ay kasoo muuqdeen wadamo ay ku jiraan Cuba, China, DRC, Eritrea iyo Saudi Arabia oo lagu dhaliilo qaabka ay dumarka ula macaamilaan.
Kulanka uga socda magaalada Muqdisho Madaxda Soomaaliya oo galey maalintiisa..
Salaad Cali Jeelle oo ka sheekeeyay weerarkii hotel Naasa Hablood 2 [Dhageyso]
Soomaliya 29.10.2017. 18:46
Baarlamaanka oo ka doodaya dhisamaha Gudi muhiim ah
Soomaliya 28.10.2017. 10:59
Puntland 21.10.2017. 21:06
Soomaliya 19.10.2017. 17:24
Taliyaha Ciidamada Somaliland: Caare waa dambiile mudan dil toogasho 25.08.2019. 16:05
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo dheeri ah u daabushay Dhuusamareeb 25.08.2019. 15:23
Dalka iyo lacagta lagu maal-geliyay weerarkii DusitD2 oo la shaaciyey 25.08.2019. 13:56
Deni oo ku baaqay in wada hadalka DF iyo Somaliland lagu qabto Garowe 25.08.2019. 12:10
Xaaf oo eryay wasiir dhaliilay guddiga shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug 25.08.2019. 09:22
Ahlu Sunna: DFS waxay baalmartay dastuurka iyo wadiiqadi lagu heshiiyey 25.08.2019. 08:15